Mohamed Caabi Elyachroutu : “ady amin’ny kolikoly sy antoka ho an’ireo mpampiasa vola” | NewsMada
Mohamed Caabi Elyachroutu : “ady amin’ny kolikoly sy antoka ho an’ireo mpampiasa vola”
Nibahan-toerana tamin’ny kabary nataon’ny zokiolona solontenan’ny masoivoho vahiny eto Madagasikara, Mohamed Caabi Elyachroutu, nandritra ny fifampiarahabana teny Iavoloha, ny raharaha toekarena. « Manana harena betsaka tokony hotrandrahina i Madagasikara, eo amin’ny fizahantany, fambolena, jono, harena ambanin’ny tany … », hoy i Mohamed Caabi Elyachroutu, ambasadaorin’ny Nosy Comores. Tsy ampy mihitsy izany ny fifantohantsika amin’ireo seha-pihariana maro samihafa ireo, koa mitaky fahavononana amin’ny mpitondra fanjakana sy finiavana amin’ny vahoaka malagasy manontolo. Nasiany teny fa ny amin’ny « tsy maintsy hiantohan’ny fanjakana ny fandriampahalemana, ady amin’ny kolikoly sy fanomezana antoka ireo mpampiasa vola any amin’ny raharaham-pitsarana ».
Nandritra izany kabariny izany, nitondra ny fanamarihan’ny Banky iraisam-pirenena izy momba ny toekarena malagasy izay manomboka miarin-doha tsikelikely taorian’ny krizy naharitra dimy taona. Navoitrany manokana ny famatsiana angovo. Mibaribary ny maha tratra aoriana an’i Madagasikara amin’io sehatra iray lehibe iankinan’ny toekarena io.
Misy anefa ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny famatsiana angovo, ny fitrandrahana angovo azo havaozina, avy amin’ny masoandro, rano sy fandaharanasa momba izany hatramin’ny taona 2021. « Ny hampiakarana hatrany ny harinkarem-pirenena anefa, miankina ihany koa amin’ny fanodinana akora fototra sy fanondranana vokatra any ivelany », hoy ihany ny masoivoho zokiolona, Mohamed Caabi Elyachroutu.
Tsy misy fivoarana ny ambanivohitra maro
Saingy eo anefa ny loza voajanahary, tsy azo ialana, manapotika ny zava-bita, toy ny fambolena sy ny fotodrafitrasa. Voadona, araka izany, ny toekarem-pirenena. Ao koa anefa noho ny ataon’ny olombelona ihany, karazany mandrora mitsilany ihany, vokatry ny fiovan’ny toetr’andro, indrindra ny haintany. Misy ifandraisany betsaka amin’ny tsy fisian’ny fivoarana any ambanivohitra maro ireny fahapotehan’ny ala ireny. Lalana ratsy, jiro tsy misy, hopitaly marary … Manana andraikitra lehibe amin’izany ny mpitondra fa tsy hiandry ONG sy fanampiana lava avy any ivelany.